Kungani izinja zikhotha izinyawo? | Izinja Umhlaba
Kungani izinja zikhotha izinyawo?
Isithombe - Frenchiemania.com
Ingabe inja yakho ikhotha izinyawo zakho? Kunezindlela ezithile zokuziphatha kwe-canine ezinelukuluku kakhulu, enye yazo iyilokho impela. Kungani enza lokhu? Ungalithanda iphunga? Iqiniso ukuthi kunezizathu eziningana, ezinye ziyamangaza kakhulu uma kungenzeka kunesimo sakho sengqondo.
Ngakho-ke uma ufuna ukwazi kungani izinja zikhotha izinyawo, unganqikazi: qhubeka ufunda.
1 Kungani bekwenza?
1.1 Ngoba banuka njengawe
1.2 Ukukwazi kangcono
1.3 Ufuna ukukubuza okuthile
1.5 Ngoba unokuthile okubambekile
2 Kuthiwani uma inja yakho ikukhotha izinyawo?
3 Ingabe kuhle ukuvumela inja ikukhothe izinyawo zakho?
3.1 Ingabe kukhona okungenziwa ukukugwema?
Ngoba banuka njengawe
Izinja yizilwane eziqondiswa kakhulu ngephunga lomzimba. Kancane kancane, kusukela osukwini lokuqala abanathi, baqala ukuhlanganisa iphunga lethu nephunga lomndeni wabo, into ezobasiza bazizwe beyingxenye yeqembu, lekhaya. Futhi-ke, lezi furry lapho zifuna ukunika uthando enye yezinto eziyenzayo ukukhotha, futhi uma izinyawo zitholakala kahle ... lapho ziya khona. 🙂
Yize kuzwakala kungajwayelekile, bangazi okuningi ngathi ngephunga lomzimba wethu. Kungani? Ngoba Leli phunga likhipha ama-pheromones, okuyizinto ezingabonakali ukuthi akwenzayo adlulisele imiyalezo kwabanye. Isibonelo, izinja zingathola umbono wokuthi sizizwa kanjani ngokuzihogela nje. Kungenxa yalesi sizathu ukuthi izinyawo zinephunga elimnandi ngokwengeziwe, lapho zizothanda kakhulu khona.
Ufuna ukukubuza okuthile
Izinja lapho befuna okuthile benza noma yini edingekayo ukuze sinakwe. Uma ekuseni sebenze imisindo emincane kanye / noma okunye okubi kodwa bengakutholi abakufunayo, kungenzeka kakhulu ukuthi bagcine ngokukhotha izinyawo zabo. Ngakho-ke bazoyifeza inhloso yabo.
Kwesinye isikhathi incazelo elula kakhulu yokuziphatha okunelukuluku noma exakile iyona eyiqiniso. Izinja zingamane zikhothe izinyawo zazo ukuze ziphumule, njengoba kwenza umama wazo lapho esengumdlwane. Isenzo sokukhotha sicabanga ukuthi bakhululwe ama-endorphin, okuyizinto ezibathulisa.
Ngoba unokuthile okubambekile
Esinye isizathu esilula ukuthi Sihambe singafake zicathulo, isibonelo, siye ekhishini futhi ngaphandle kokuqaphela sishiye imvuthuluka yesinkwa. Ngakho-ke, izinja, ngomuzwa wazo onamandla wokuhogela, zizolithola ngokushesha iphunga lesinkwa ezinyaweni futhi, lapho nje zithole ithuba, zizobeka izinsalela zokudla esikuhambile emilonyeni yazo.
Kuthiwani uma inja yakho ikukhotha izinyawo?
Siyazazi izizathu ezingenzeka ukuthi kungani inja ingakhotha izinyawo zethu, kodwa… kwenzekani uma kwenzeka? Yebo, iqiniso ukuthi akukho okumele kwenzeke. Uma kuwumdlwane, mhlawumbe uzosilumaKepha leyo yinto esingayigwema ngokumfundisa ukuthi angakwenzi lokho. Kanjani? Ngokubekezela nokumnikeza ithoyizi ngokushesha lapho sibona ukuthi usezosiluma.
Okunye okungenzeka ukuthi uyazithoba. Isibonelo, lapho esesimweni esicindezela kakhulu, angahle akhothe izinyawo zethu ukuzama ukusitshela ukuthi sehlise umoya. Ngakho-ke, kubalulekile ukuzama ukugwema ukungezwani, ekhaya nangaphandle kwayo, ngoba akekho umuntu othanda ukuhlala ngokwesaba.
Ingabe kuhle ukuvumela inja ikukhothe izinyawo zakho?
Kuya. Uma kuyisimo olele kuso nenja izolile, akunankinga. Kepha uma oyedwa kulaba ababili enovalo, noma uma uqala ukubona ukuthi lokhu kuziphatha kubukeka kuphenduka inkanuko, kufanele ubamise ngokuya kwelinye igumbi isikhashana baze behlise umoya.
Kunabantu abangayithandi inja yabo ekhotha izinyawo. Kungenxa yokuthi abakwazi ukumelana nokukitaza okubangelwa ukukhotha noma ngenxa yokuthi bazizwa bengakhululekile kulezi zimo, bangathola enye indlela yokubavimbela ekuziphatheni ngale ndlela.
Ngaphezu kwalokho, kufanele futhi sithembe ukuthi kungenzeka ukuthi sinyathele ucezu lwengilazi noma ipuleti elaphulwe ngalo lolo suku singanakile. Uboya bethu babungagwinya, okungaba yingozi. Kuzo zonke lezi zizathu, ake sibone ukuthi senzeni ukuze siyeke ukukhotha izinyawo zethu:
Indlela eshesha kakhulu futhi esebenza kahle kakhulu ukwenza ungahambi ungafaké zicathulo. Kulezi zinsuku benza amasokisi endwangu enhle kakhulu esingayigqoka ehlobo, nangokotini ebusika. Uma ungakuthandi ukugqoka amasokisi, ungahlala ugqoka ama-flip-flops noma amateki aphezulu kakhulu.
Enye inketho ukwenza uqondise kabusha inja, Lokhu kutholakala kalula ngale ndlela elandelayo: isikhathi ngasinye lapho uya ezinyaweni, sizobabiza ngokukukhombisa umuthi wezinja onuka kakhulu, njengebhekoni. Uma usukhona ngakithi sizokunikeza lona. Kuzofanele siphinde kaningi, kepha ekugcineni sizoyifeza inhloso yethu. Ukubekezela kuyisihluthulelo sempumelelo, ngakho-ke yenza kalula.
Enye into esingayenza zidonse ukunaka kwabo ngamagama akhulunywe ngezwi elijabulisa kakhulu, njengalapho sizodlala futhi sibatshela ukuthi "Wozani, masidlale kamnandi!" Ngemuva kwalokho-ke, kufanele udlale naye isikhashana, noma ngabe kusofa ofanayo.
Izinja yizilwane kwesinye isikhathi ezibonisa isimilo esiheha ukunakwa kwethu. Kwesinye isikhathi zingaba mnandi, kepha kwesinye isikhathi zizosenza sizwe imizwa engemnandi. Ngalesi sizathu, uma okwakho kukhotha izinyawo zakho, ngeke kube khona ongcono kunawe onquma ukuthi ufuna leso simo siziphinde yini, noma uma kunalokho kufanele sime ngokushesha okukhulu.
Ngabe ukuthole kuthakazelisa?
Indlela ephelele ye-athikili: Inja yomhlaba » Izinja ezijwayelekile » Curiosities » Kungani izinja zikhotha izinyawo?
Kungenzeka yini ukuthi ukukhotha kuhlobene nenkinga yezempilo engaba khona? Ukujikeleza ezinyaweni? Ngiyabonga kakhulu ngokunginaka kwakho.
Black and Tan Coonhound, inja enomuzwa omuhle kakhulu wephunga